Uyithengisa njani ukuba uzinzo kwiBrand yakho kunye neyantlukwano? | Martech Zone
Usuku lomhlaba Bekule veki kwaye sibone ukuqhuba okuqhelekileyo kwezithuba zentlalo apho iinkampani zikhuthaza khona okusingqongileyo. Ngelishwa, kwiinkampani ezininzi - oku kwenzeka kanye ngonyaka kwaye ezinye iintsuku babuyela kwishishini njengesiqhelo.
Kwiveki ephelileyo, ndigqibile umasifundisane wentengiso kwinkampani enkulu kwishishini lokhathalelo lwempilo. Elinye lawona manqaku ndiwenzileyo kulo masifundisane yayikukuba inkampani yabo kufuneka ithengise ngcono ifuthe elenziwa yinkampani yabo kwindalo esingqongileyo, ukuzinza, ukubandakanya, kunye neyantlukwano.
Kwiminyaka edlulileyo, iinkampani bezihlala zityhalela ngenxalenye yeenzuzo zazo kwezinye izinto ezinkulu zoncedo, zikhupha ingxelo epapashwa kwiminikelo yazo, zayibiza ngokuba ngumhla. Oko akuyikusika kwakhona. Bobabini abathengi kunye namashishini ngokufanayo bafuna ukwenza ishishini neenkampani ezibonelela ngeempahla kunye neenkonzo abazifunayo… kodwa zikwanceda uluntu. Ayisiyiyo kuphela abathengi abafuna oku, ke nabo banokuba ngabasebenzi bethu.
Ngelixa bangabathengi, ndichukumisekile yindlela UDell Technologies uzibophelele ekwakheni ifuthe labo kwezentlalo kunikezelo lwazo kunye nenkcubeko yequmrhu. Ngumzekelo omhle onokuwulandela. Kananjalo, baqhubekile ukuqhuba izinto ezintsha, banokhuphiswano njengangaphambili, kwaye abayincami inzuzo ukuze benze njalo. Bayayiqonda ukuba ayisiyiyo kuphela into elungileyo ukwenza, likwalicebo elihle loshishino.
Indalo esingqongileyo kunye noZinzo
Nanku omnye umzekelo omangalisayo… UDell uphinde wahlaziya iiplastikhi zaselwandle kwiipakethe zazo. Ukuzinza kunye nomsebenzi wendalo esingqongileyo awuyeki apho, nangona. Ngaphandle kokurisayikilisha, bakwasebenza kwielebhile ze-eco, ukunciphisa amandla, kunye nokwehla kweenyawo zekhabhoni. Babeke uzinzo kuwo onke amakhonkco kwikhonkco labo lokubonelela.
Ukwahluka kunye nokubandakanya
UDell uvulekile kwaye unyanisekile malunga nokungabikho kokwahluka kunye nokubandakanyeka kushishino lwetekhnoloji. Oku ngaphambili kuye kwakhokelela ekubeni bambalwa kunye nabasetyhini abangabinalo ithuba abanye abanalo kolu shishino. UDell uzibophelele kwimithombo yolwazi, etyale imali kwiinkqubo zemfundo yabasaqalayo kwihlabathi liphela, ukuze abonakale ekuhleni. Baye bayibeka ngaphambili nakwiziko ekugayweni kwabo:
Ukungafihlisi kunye neNgxelo
Ukungafihlisi kuyeyona nto iphambili. UDell unayo ingxelo rhoqo kwinkqubela phambili yayo, ukubeka phambili imisebenzi kunye neziko ukuze abathengi, amashishini, kunye nabatyali mali bazi inkqubela phambili yabo. Abazange bathi banayo zi cwangciswe le micimbi, kodwa bayaqhubeka elubala baxele kwaye babonise inkqubela phambili yabo. Olu luthengiso olukhulu.
Ndingakukhuthaza ukuba ubhalise kwaye umamele i I-Dell Luminaries podcast endibambisene nayo UMark Schaefer. Sinesihlalo somqolo wokuqala, esenza udliwanondlebe neenkokheli, amaqabane, kunye nabathengi bakaDell abenza lo mahluko.
Dell Izibane zePodcast
Ke, lithini iqhinga lakho lokudibana kwaye uphawu lwakho lujongwa njani ngokwembono yokulunga kwezentlalo? Ngaba zikhona izinto onokuzenza ukutshintsha iinkqubo zakho zangaphakathi ukuphucula ukuzinza kunye nokubandakanya? Kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ungathetha njani ngezo nzame ngokufanelekileyo kwithemba lakho nakubathengi?
Kwaye ungalibali… ukunikela ngemali akonelanga. Abathengi kunye namashishini alindele ukubona entlalontle Ingene kwinkcubeko yakho nakwinkqubo nganye. Umthengi wakho olandelayo okanye umqeshwa ufuna ukwazi ukuba uzinikele ekwenzeni umhlaba ube yindawo engcono, hayi ukuyishiya nje yenziwe ngomnye umntu.
tags: hlukanayokusingqongileyoiplasitiki yolwandleukuqashwanokuzinza